Nzvimbo yeSamara yakasarudzika mune zvayo zvisikwa: pane yayo nzvimbo yakakura kune zvinopfuura 300 zvivakwa zvakasikwa. Izvozvi pano izvo zvisingawanisisiki marudzi emarudzi nemhuka akachengetedzwa. Pane ndima iyi kucherwa kunoitwa ...
Kune marudzi ese ehupenyu, uye zvinowanzoitika kuti amai nemwanasikana havangataure nemoyo, vazivisa zvakavanzika zvavo nekunetseka. Mune ino kesi, unogona ...
Huwandu hweRostov-on-Don nhasi hunopfuura 1 mamirioni 100 zviuru. Anotora chivimbo chinzvimbo chegumi mune rondedzero yemaguta eRussia nehuwandu hwevagari. Mugari wemamirioni akazvarwa mu1987, ...
Kubva panguva yekufungidzira, makomo anoputika anotyisa uye anokwezva vanhu. Kwemazana emakore vanogona kurara. Muenzaniso nhoroondo yazvino ye Eyyafyatlayokudl volcano. Vanhu vanorima minda pamawere emakomo emoto, vanokunda mapena avo, ...
Zvinoenderana nekarenda yaGregorian, 7 Kukadzi inofungidzirwa kuti 38 zuva regore. Munhoroondo yese, zviitiko zvakawanda zvisingakanganwike zvakaitika pazuva rakaratidzwa. Ichi ndicho chinyorwa chino chichaiswa kwavari. Nguva Yezuva Remitambo ...
Hwe "Vakadzi Vapfumi muRussia" chiyero chakaburitswa nemagazini yeForbes kwemakore akati wandei mumutsara. Mwaka uno, yaisanganisira vatori vechikamu ve30 vane saizi yenzvimbo kubva pamadhora 60 mamirioni kusvika kumadhora zviuru mazana mana emadhora ...
Muhupenyu hwevanhu veChinese, tii inomira munzvimbo inokosha, uye kunwa tii yakashandurwa zvachose kuve yakasarudzika yemitambo yetii. MaChinese anofarira tii kune zvimwe zvinwiwa kunyange muzhizha: iye ...
Mazwi uye mazwi ndechimwe chikamu chetsika dzerudzi chero rupi zvarwo. Zvimwe zvezvirevo uye zvirevo zvinoshandiswa nevanhu vasingazeze. Saka zvakarongeka ivo vanokodzera mukutaura kunonzwika. Nhamba huru yeiyi inozivikanwa ...
Guta reMoscow harisi rinoshamisa chete kune chokwadi chekuti ndiro guta guru renyika. Iyo yakachengetedza zvichemo zvakawanda zvetsika dzenyika. Akatotangira muzana ramakore re15, kuvaka kweMoscow kwave kuratidza kwetsika dzenyika. Architecture ...
Muti usingajairwi webaobab wakasarudzika mune zvese: saizi, huwandu, uye urefu hwehupenyu. Kunyangwe kupona kwayo kunoshamisa kuchiva chero chinomera. Baobab muti unoshamisa. Ndiye nhengo inopenya kwazvo yemhuri yeMalvaceous, ...
Pane imwe nguva, mumwe mukadzi akangwara, anoverengwa uye akadzidza akauya kuzoshanyira mhuri yakangwara. Munguva yekuungana, senguva dzose, vakatanga kutaura pamusoro pezvinyorwa zvepamusoro, kunyanya, pane vasingatenderi zvisiri pamutemo, ...
Hupenyu hwe squirrels mune zvakasikwa inoitika, sekutonga, mumasango. Hwaro hwekudya kwemhuka imbeu dzemarudzi emuti. Ndokusaka squirrel ichigara mumasango akavhenganiswa, umo inogona nyore kuwana ...
Chitsuwa cheCyprus, chinodikanwa nevakawanda, chinozivikanwa nemahombekombe ayo akanaka, zuva rinopisa uye kunopisa. Muzhizha, mweya unodziya zvakanyanya zvekuti tembiricha yekuCyprus inofamba pamusoro pechiratidzo pa35 ° С. Pano ...
Nhunzi ndedzakarongedzeswa madhiri, pane ayo anopfuura zviuru zana nemakumi mashanu emarudzi munyika. Uye vashoma chete avo ndivo vatakuri vehutachiona, mazhinji acho haana kutokuvadza, semabhururu. Saka chii ...
Nzira yekuisungira sei chipfuva - nzira uye matipi
Kupfekedza mazamu ndiyo imwe yenzira dzekumisa lactation, iyo inoshandiswa nevakadzi vanoda kuendesa mwana kuzvidya zvekunyepa. Asi nzira iyi pane isina kuchengetedzeka. Kana iwe usingazive maitiro ekupfekedza chipfuva uye zvipi ...
Wese murume anorota shave rakachena uye rakachena pasina kupisa, kucheka uye kutsamwiswa. Kuveura ndebvu imhando yeunyanzvi iyo inoda kuvandudzwa. Basa guru mairi nderokushandisa chiridzwa. Nhasi ...
Zvivako zvinogadziridzwa uye zvisinga zivikanwe - kushandiswa zvine musoro. Dhipatimendi rezvisikwa
Zvivakwa zvakasikwa zvakakosha kunharaunda. Ivo vanoita sosi yakakosha yekugadzirwa kwezvinhu. Mamwe maindasitiri, kunyanya ezvekurima, anotsamira zvakananga pazvinhu zvakasikwa. Chaizvoizvo ...
MuMoscow, munhu wese anogona kuwana huwandu hukuru hwezvinokwezva. Zvinonyanya kufadza vashanyi zvigadzirwa zvemauto mumamyuziyamu muMoscow. Zviratidziro kubva panguva yeHondo Yenyika II kusvika panguva ino.
Iyo carp mhuri ine inoshamisa sirivha carp hove. Nekuda kwehupenyu hwake hwekufudza uye huremu hwakakura, akave husavi hwevaredzi vazhinji. Ndokusaka vari kunyatsodzidza maitiro ake nemufananidzo ...
Kuvandudza kugadzirwa, kuderedza mari yekugadzira, kugadzirisa zvese maitiro, nekugadzirisa chimiro chemabhizinesi - zvese izvi zvakakosha mamiriro ekuvandudzwa kwebhizimusi razvino. Chii chinogona kuita kuti mabhizinesi aite zvese izvi? ...
Mibvunzo ye254 mu database yakagadzirwa mu 1,045 masekondi.